मास्क नलगाई हिँड्दै हुनुहुन्छ ? हाेसियार ! नत्र पर्नुहाेला प्रहरीको फन्दामा — नयाँ कुरा
मास्कबिना हिँडडुल गर्नेलाई अब प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही गर्ने भएको छ।
व्यक्तिगत स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड उल्लंघन हुने क्रम बढेपछि गृह मन्त्रालयले त्यस्ता व्यक्तिलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।
गृह मन्त्रालयले सोमबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मास्क र व्यक्तिगत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्न परिपत्र गरेको हो। गृहले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरेको छ।
गृहका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय सुरक्षा मापदण्ड पालना नभएको, सामाजिक दूरी पनि कायम नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी यस्तो परिपत्र गरिएको हो। ‘मास्क नलगाइकन हिँड्ने, सामाजिक दूरी कायम नगर्नेजस्ता कार्यले संक्रमित व्यक्तिबाट रोग सर्ने सम्भावना बढेर गएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्न परिपत्र गरिएको हो।’
कोभिड-१९ का कारण जारी लकडाउनलाई केही सहजीकरण गर्दै सरकारले सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग र सामाजिक दूरी कायम गर्न भनेको थियो। तर, पछिल्लो समय यो पालना हुन छोडेको छ।
अधिकारीका अनुसार अब प्रहरीले बिनामास्क हिँड्नेलाई पक्राउ गर्न सक्छ। सामाजिक दूरी कायम नगर्नेलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। यस्तोमा संक्रामक रोग ऐन २०२० आकर्षित हुन्छ। उक्त ऐनले जरिवाना तथा कैदसम्मको व्यवस्था गरेको छ।